दु’र्घटनापछि जसले अस्पताल पुर्‍याए, उनैले बाइक लिएर कुलेलम ठोके ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /ताजा समाचार/दु’र्घटनापछि जसले अस्पताल पुर्‍याए, उनैले बाइक लिएर कुलेलम ठोके !
दु’र्घटनापछि जसले अस्पताल पुर्‍याए, उनैले बाइक लिएर कुलेलम ठोके !
काठमाडौं– काठमाडौं गल्फुटार बस्ने कञ्चनपुरका शोहितविक्रम शाही २०७४ फागुन ९ गते बसुन्धारामा मोटरसाइकल दु’र्घटनामा घा’इते भए। घा’इते अवस्थाका उनी आफैं मोटरसाइकल चलाएर अस्पताल पुग्न नसक्ने भएपछि नजिकै रहेका युवकसँग सहयोग मागे। ती युवकले शोहितलाई उनकै मोटरसाइकलमा राखेर नजिकैको चिरायु अस्पताल पुर्‍याए। अस्पताल पुगेपछि उपचार सुरु भयो। उनले मोटरसाइकलको साँचो माग्ने होस नै पाएनन्। यता ती युवक भने साढे चार लाखमा खरिद गरिएको शोहितको बा ७३ प ४२२७ नम्बरको केटीएम ड्यूक बाइक लिएर कुलेलम ठोके।
घा’इते अवस्थामा अस्पतालसम्म पुर्‍याएर गुन लगाएका युवाले ब’दलामा मोटरसाइकल नै उ’डाइदेलान् भन्ने शोहितले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। “म उपचार गराउन थालें उनी त मोटरसाइकल मात्र होइन, मेरो मोबाइल फोनसमेत लिएर भा’गेछन्,” आइतबार महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा भे’टिएका शोहितले भने। दुई वर्षअघि चोरी भएको त्यही मोटरसाइकल प्रहरीले यसै साता पाटन मंगलबजारबाट फे’ला पार्‍यो। नक्कली नम्बर बा ८४ प ८३९३ राखिएको उक्त मोटरसाइकल आइतबार प्रहरीले शोहितको जिम्मा लगाएको छ।
काठमाडौंको नयाँबजार बस्ने धादिङका बाबुराम कार्की गत मंसिर १९ गते बिरामी आ’फन्त भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज गएका थिए। भर्खरै सर्विसिङ गराएको बा ७८ प ७१९६ नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल अस्पतालको पार्किङमा राखेर बि’रामी भेट्न गएका उनी आधा घण्टापछि फर्किंदा मोटरसाइकल देखेनन्। ‘अस्पतालको सीसीटीभी फुटेज हेर्दा ६ बजेको ‘एन्टिलाईट’ परेकोले मोटरसाइकल चो’री गर्नेको अनुहार स्पस्ट देखिएन। तर, उनको मोटरसाइकल पनि यसै साता फे’ला पारेर प्रहरीले उनलाई बुझाएको छ।
आइतबार मोटरसाइकल लिन ट्राफिक महाशाखामा पुगेका कार्कीले भने, “एक हप्तासम्म त मोबाइलमा घण्टी बज्यो की ट्राफिक प्रहरीकै होला जस्तो लाग्थ्यो । पछि आशा मा’रिसकेको थिएँ।” डल्लु बस्ने मोदनाथ सिलवालको मोटरसाइकल १७ पुस, विहीबार राति घरबाटै चो’री भयो। बा ७७ प ८८६८ नम्बरको उनको पल्सर मोटरसाइकल प्रहरीले दुई दिनमै कालिमाटीबाट फे’ला पार्‍यो। सिलवालले भने, “चो’रले ह्या’ण्डल ल’क तो’डेर, तार समेत का’टेर अटो स्टार्ट हुने बनाएको रहेछ।” ह’राएको तीन दिनमै मोटरसाइकल फे’ला पर्ला भन्ने उनले अ’पेक्षा नै गरेका रहेनछन्।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौंका बिभिन्न स्थानबाट चो’री भएका २१ वटा मोटरसाइकल फे’ला पारेर आइतबार सम्बन्धितलाई बु’झाएको छ। तीमध्ये तीन वटामा नक्कली नम्बर प्लेट राखिएको थियो भने बाँकी सबै स’क्कली नम्बर प्लेटमै च’लिरहेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताए। महाशाखाको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ७९३ मोटरसाइकल चो’रीका उजुरी परेकोमा प्रहरीले २११ मोटरसाइकल फे’ला पारेकाे छ। तीमध्ये १३८ वटा सिधै र २३ वटा अनुसन्धान पछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको छ भने २९ चोरसहित १६ मोटरसाइकल आवश्यक का’रवाहीको लागि प्रहरीको जि’म्मा ल’गाइएको छ।
भारतमा २४ घण्टामा ४८ हजार भन्दा बढि संक्रमित थपिए, ७६८ जनाको मृत्यु
त्रिधार्मिकस्थल हलेसीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आग्रह
हेलिकप्टरबाट नासिक पुगेपछि अक्षय विवादमा